EYONQULO 7 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
EYONQULO 7EYONQULO 7
71Le yinkqubo ephathelele kumadini awodwa entlawulo: 2Ixhoba lokwenza eli dini kufuneka lixhelelwe apho kuxhelelwa khona amadini atshiswayo. Igazi lalo malitshizwe kumacala onke eqonga. 3Onke amanqatha makakhutshwe abekwe eqongeni: umsila, namanqatha enyama yangaphakathi, 4izintso kunye namanqatha azo, kwakunye nomhlehlo. 5Onke loo manqatha umbingeleli makawatshise enzele ngawo *uNdikhoyo umnikelo ngomlilo. Eli ke lidini lokwenza intlawulo. 6Nayiphi na indoda ephuma kumlibo wababingeleli ingayitya loo nyama. Kodwa kufuneka ityelwe kulaa ndawo ikhethekileyo, kuba kwayona ikhethekile.
7Inye inkqubo ephathelele kumadini esono nakumadini entlawulo. Loo nyama iba yeyombingeleli owenza idini. 8Kwanalo ufele lwento yedini elitshiswayo luba lolwaloo mbingeleli wenza idini. 9Wonke umnikelo wento eziinkozo ebhakiweyo okanye eyenziwe ngepani, okanye egcadiweyo, uba ngowombingeleli lowo ubewunikela. 10Umnikelo wokutya, nokuba uxutywe namafutha, nokuba womile, woba ngowababingeleli bebonke, yaye ke mabahlulelane ngako ngokulinganayo.
11Nantsi inkqubo ephathelele kumadini obudlelane enzelwa *uNdikhoyo: 12Xa umntu esenza idini lobudlelane ebulela, makeze naloo nto iza kuxhelwa kwakunye nesonka esingenagwele, nokuba sisonka esiqatywe amafutha omnquma, okanye amaqebengwana aqatywe amafutha omnquma, kungenjalo amaqebengwana enziwe ngomgubo oxutywe namafutha omnquma. 13Kweli dini lobudlelane, elikwalidini lokubulela, kufuneka ongezelele ngezonka ezinegwele. 14Makanikele ngodidi ngalunye kwezi zonka, azenze umnikelo kuNdikhoyo. Zoba zezombingeleli othe watshiza iqonga ngegazi lamadini obudlelane. 15Inyama yedini lobudlelane kufuneka ityiwe kwangaloo mini inikelwa ngayo; makungabikho nyama isalayo kude kube ngengomso.
16Xa umntu enikela idini lobudlelane, egcina isithembiso awasenzayo, okanye ethanda nje ukwenza umnikelo, leyo ke yona inyama akunyanzelekanga ukuba ityiwe iphele ngamini-nye, kodwa eseleyo ingátyiwa ngengomso. 17Inyama esekhoyo ngosuku lwesithathu kufuneka itshiswe yona. 18Ukuba ityiwe loo nyama ngosuku lwesithathu, uThixo akayi kulamkela elo dini laloo mntu, kuba lisuke *lanomlaza. Nabani na ke oya kuthi alitye uya kuluthwala uxanduva lwakhe. 19Xa inyama yedini ithe yadibana nantoni na enomlaza, kufuneka itshiswe ingàtyiwa. Wonke ubani ongenamlaza angayitya inyama yedini elo. 20Kodwa xa ithe yatyiwa nangumntu onomlaza, lowo makasikwe phakathi kosapho lukaNdikhoyo. 21Kanti xa umntu athe waphatha into enomlaza, nokuba ngumntu, nokuba sisilwanyana esingatyiwayo, nantoni na enezothe, aze asuke aye kutya idini lobudlelane likaNdikhoyo, loo mntu makasikwe ebantwini bakaNdikhoyo.
22Ubuye uThixo wanika uMosis le miyalelo 23amakayigqithisele kumaSirayeli: Akukho manqatha ankomo nagusha nabhokhwe aya kutyiwa mntu. 24Amanqatha ento efileyo, okanye ebulewe ngamarhamncwa, makangatyiwa. Kambe ke angásetyenziswa ekwenzeni ezinye izinto. 25Wonke umntu othe watya amanqatha ento ekwenziwa ngayo idini kuNdikhoyo ngomlilo makasikwe kumaSirayeli. 26Naphi na apho emi khona amaSirayeli makangaze alitye igazi, nokuba leleentaka, nokuba lelezilwanyana. 27Nabani na olityayo igazi makasikwe kumaSirayeli.
28Uphindile wathi uNdikhoyo uMosis 29makagqithisele nale mimiselo kumaSirayeli: Umntu owenza idini lobudlelane makakhuphe isabelo esithile, asinikele kuNdikhoyo, 30eze naso ngokwakhe, sibe ngumnikelo kuNdikhoyo ngomlilo. Makeze namanqatha aso kunye nencum, aziwanga-wangise zibe ngumnikelo owanga-wangiselwa uNdikhoyo. 31Loo manqatha umbingeleli wowatshisa apho eqongeni, kodwa yona incum yeyababingeleli.
32-33Umlenze wasekunene wona woba yinxaxheba yombingeleli obenikela igazi kunye namanqatha elo dini lobudlelane. 34Incum ewanga-wangisiweyo nalo mlenze wasekunene yinxaxheba emayikhutshelwe ababingeleli ngamaSirayeli ngalo lonke ixesha. 35Le yinxaxheba kaNdikhoyo eyaxhanyulwa nguAron nangoonyana bakhe mhla bamiselwa ebubingelelini. 36Ngaloo mini yokuthanjiswa kwababingeleli uNdikhoyo wathi amaSirayeli makakhuphe eso sabelo sedini sibe yinxaxheba yabo. Lo ngummiselo omawuhlale uhleli.
37Nantso ke imiyalelo yaxa kusenziwa amadini atshiswayo, nawokutya, nawokungxengxezela izono, kunye nawentlawulo, amadini okumisela ababingeleli, kwakunye nawobudlelane. 38Kwakusentabeni iSinayi entlango ngamhla uNdikhoyo wayinika uMosis le miyalelo yokwenziwa kwamadini ngamaSirayeli.